Taariikh-da Iyo Xaqiiqooyinka Cusub Ee Laga Diiwaangaliyay Guushii Real Madrid Ee Chelsea
HomeWararka CiyaarahaTaariikh-da iyo Xaqiiqooyinka Cusub ee laga Diiwaangaliyay Guushii Real Madrid ee Chelsea
April 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Goolkii waqtigii dheeriga ahaa ee Karim Benzema ayaa Real Madrid u soo saaray semi-finalka Champions League inkasta oo ay guuldarro 3-2 ah ka soo gaartay kooxda Chelsea.
Real Madrid ayaa waqti dambe u dagaallantay inay usoo baxdo wareegga semi-finalka, iyadoo waqti horeba ogolaatay in laga dhaliyo saddex gool, hase yeeshee laba gool oo ay waqti dambe u dhaliyeen Rodrygo Goes iyo Karim Benzema ayaa u horseeday inay kusoo gudubto ciyaar waqti dheeraad ah lagu daray.
Xaqiiqooyinka la Diiwaangaliyay
Chelsea ayaa noqotay kooxdii labaad ee Ingriiis ah ee saddex gool ka dhalisa Real Madrid oo ay marti u tahay, waxaana kaliya ka horreysay Manchester United oo sannadkii 1968kii barbarro 3-3 ah la gashay Real Madrid oo ay kula ciyaartay Santiago Bernabeu.
Karim Benzema ayaa taariikhda galay, waxaana goolka uu caawa ka dhaliyey Chelsea uu ahaa goolkii 13aad ee uu ka dhaliyo kooxaha Ingiriiska ka dhisan, waxaana uu noqday ciyaartoygii labaad ee goolasha ugu badan ka dhaliya kooxaha Premier League. Kaliya Lionel Messi oo 27 gool ka dhaliyey kooxaha Premier League ahaa ah ciyaartoyga kaliya ee dhibaatada ugu badan ku abuuray kooxaha Ingiriiska. Afar ka mid ah goolashaas waxa uu Karim Benzema ka dhaliyey Chelsea labadii ciyaarood ee wareegga siddeedda Champions League.
Karim Benzema waxa uu noqday wadka Chelsea, waxaana uu ka dhaliyey shan gool oo dhamaantood Champions League ah. Xilli ciyaareedkii hore ayuu semi-finalka kaga dhaliyey gool, afarna sannadkan ayuu ka dhaliyey. Lionel Messi oo 9 gool ka dhaliyey Arsenal, sidoo kalena 7 gool ka dhaliyey Man City ayaa ah ciyaartoyga kaliya ee nafta u keenay kooxaha Ingiriiska ee ka goolal badan Benzema markii uu kooxaha Premier League ka hor tegay.
Luka Modric ayaa caawintiisii afraad ee Champions League ah sameeyey xilli ciyaareedkan, waana caawintiisii ugu badnayd ee hal xilli ciyaareed gudihii uu ka sameeyo Champions League tan iyo markii uu Real Madrid kusoo biiray xilli ciyaareedkii 2012-13. Isu-geyn, waxa uu Modric caawiyey 16 gool oo Champions League ah, waxaana kaliya ka caawin badan Cristiano Ronaldo oo 20 gool oo Champions League ah caawiye ka noqday.
UEFA ayaa xiddigii garoonka siisay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Luka Modric oo ahaa caawiyaha goolka koowaad ee kooxdiisa, isla markaana dhamaystay 120 daqiiqadood oo ay ciyaartu socotay iyadoo ay da’diisu tahay 36 jir, dhowaanna ay da’diisu noqon doonto 37 jir. Kaliya Thiago Silva oo 37 jir ah ayaa ka da’ weynaa ciyaartoydii garoonka ku jirtay, hase yeeshee khadka dhexe ee uu ka ciyaarayo ayaa ka shaqo, orod iyo tamarba badan difaaca.
Inkasta oo ay UEFA abaal-marinta siisay Luka Modric, warbaahinta ayaa samaysay qiimayn ka duwan, waxaanay sheegeen in xiddignimada uu u qalmayay Reece James.